सामग्री लम्बाई: ध्यान स्पानहरू बनाम सगाई | Martech Zone
१० बर्ष भन्दा पहिले, मैले त्यो लेखें ध्यान स्प्यान बढ्दै छ। हामीले ग्राहकहरु सँग धेरै बर्ष काम गर्‍यौं, यो मिथकको बाबजुद प्रमाणित हुन जारी छ कि पाठकहरु, दर्शकहरु, र श्रोताहरु लाई पनी छैन। परामर्शदाताहरु कि जारी गर्न जारी ध्यान फराकिलो कम भएको छ, म बोलोक्स भन्छु। के परिवर्तन भएको छ छनौट - हामीलाई छिटो छोड्ने अवसर प्रदान गर्दै अप्रासंगिक, खराब गुणस्तर, वा गैर-आकर्षक उत्कृष्ट सामग्री फेला पार्न सामग्री।
जब मैले पहिलो पटक हाम्रो पोडकास्ट सुरू गरें, उद्योगमा मेरा साथीहरूले भने कि कसैले पनि minutes मिनेट भन्दा बढि सुन्ने छैन ... यहाँ हामी वर्षौं पछि छौं र प्राय जसो पोडकास्ट to० देखि minutes० मिनेट लामो छ। त्यो मात्र हो, श्रोताहरू पोडकास्टहरूमा घण्टा सुन्न द्वि घातुमान हुन्छन्। हेक, म फ्लोरिडा गएँ र सुनें सिरियल पोडकास्ट सडकमा hours घण्टाको लागि।
सप्ताहन्तमा, मेरा साथीहरू प्राय: कार्यक्रमहरूका द्वि घातुमान अवलोकनका बारे मजाक गर्छन्। के यो छोटो ध्यान अवधि हो? पक्कै छैन। विज्ञापन खपत पनि परिवर्तन हुँदैछ। यहाँ भिडियो विज्ञापन लम्बाइमा युट्यूबबाट भर्खरको अध्ययन गरिएको छ।
२०१ 2014 मा यूट्यूब विज्ञापन लीडरबोर्डमा विज्ञापनको औसत लम्बाई औसत तीन मिनेट थियो - २०१ 47 बनाम। 2013 2014% बनाम २०१.। र २०१ ads र २०१ in मा शीर्ष विज्ञापनहरू मध्ये कुनै पनि एक मिनेट अन्तर्गत थिएन। बेन जोन्स, गुगलका साथ सोच्नुहोस्
एक दशक को लागी, जब सोधिन्छ "कहिले सम्म?", म सधैं भन्छु कथा भन्नको लागि पर्याप्त लामो र अब छैन। हाम्रो ग्राहकहरूको लागि, त्यसले हामीलाई प्रत्येक हप्ता कम लेखहरू प्रकाशित गर्नेतर्फ डो .्याउँछ, तर प्रत्येक लेख निश्चित गर्न अझ गहिराईमा हुन्छ। हाम्रो अडियो ग्राहकहरूका लागि, लक्ष्य रेकर्ड गर्नु हो जब मूल्य प्रदान गरिन्छ, र त्यसपछि शो समाप्त हुन्छ। भिडियोको लागि, लक्ष्य भनेको आकर्षक एनिमेटेड वा रेकर्ड भिडियोहरू प्रदान गर्नु हो। भिडियो कति मिनेट छ त्यसमा ध्यान नदिनुहोस्, यसले कथाले कत्तिको प्रभावकारी देखाउँदछ र हेरिरहेको दर्शकलाई सages्लग्न बनाउँछ। म विश्वास गर्दछु धेरै मार्केटर्सले बाउन्स रेटहरू र ध्यानहरू विश्लेषण नगरी ध्यान दिन्छन्
म विश्वास गर्दछु धेरै धेरै मार्केटर्सले रूपान्तरणको विश्लेषण नगरी बाउन्स दर र दृश्यमा ध्यान दिन्छन्। दुईवटा परिदृश्य हेरौं:
तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू र सेवाहरूको संक्षिप्त २-मिनेट अवलोकन भिडियो उत्पादन गर्नुहुन्छ र यो १०० चोटि हेराईमा देखीन्छ2०% दर्शकहरूले भिडियोको पूरा लम्बाई हेर्दै। तपाइँ तपाइँको व्यापार को लागी एक दर्जन पूछताछ प्राप्त र १०,००० डलर को एक करार को एक बन्द गर्नुहोस्।
तपाइँले एक -० मिनेटको वृत्तचित्र उत्पादन गर्नुहुन्छ जुन तपाइँको व्यवसायको कथा बताउँदछ, यो कसरी भयो, तपाइँले सहयोग गर्नुभएको ग्राहकहरू, तपाइँको प्रक्रियाको पैदल यात्रा, र दर्शकहरूका लागि केही सल्लाह प्रदान गर्नुहुन्छ जुन कार्यवाही योग्य छन्। यो १०० चोटि हेराईमा देखाइन्छ १०% दर्शकहरूले भिडियोको पूरा लम्बाई हेरिरहेका छन्। तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को लागी केहि सोधपुछ गर्नुहोस् र तपाइँको पहिलो १०,००,००० अनुबंध बन्द गर्नुहोस्।
कुन एक तपाईंको व्यवसायको लागि राम्रो रणनीति थियो?
म छोटो सामग्री ढक गर्दै छु। सजिलै उपभोग्य सामग्रीले जागरूकता बढाउन सक्छ र ब्रेडक्रम्ब ट्रेल छोड्दछ जुन समयको साथ ब्याज जुटाउन सक्छ। मेरो कुरा केवल यो हो कि यो ध्यान स्प्यानहरूको बारेमा होईन, यो स it's्लग्नताको बारेमा हो। मानिसहरू प्राय असंबद्धताको लागि ध्यान गल्ती गर्दछन्। मलाई कुनै आपत्ति छैन यदि व्यक्तिहरू मेरो पृष्ठमा अवतरण गर्दछन्, छिटोमा निर्धारण गर्नुहोस् कि तिनीहरूलाई के आवश्यक थिएन, र त्यसपछि छोड्नुहोस्। मान्छेले मेरो पृष्ठ राम्रो साइट भएको साइटमा जानको लागि छोड्छ भने म आपत्ति गर्दछु!
टैग: एकाग्रता अवधीसामग्री लम्बाईमंगनीकति लामोसुन्छपोडकास्ट लम्बाईगुगलका साथ सोच्नुहोस्भिडियो विज्ञापन लम्बाईभिडियो लम्बाईहेराइहरूYouTube
ईमेल, फोन, भ्वाइसमेल, र सामाजिक बिक्रीको लागि १ Sa बिक्री तथ्या .्क
A 33 एक्रस: प्रि-बिड फ्रड फिल्टरको साथ इन-दृश्य दर्शक मुद्रीकरण
डिसेम्बर १, २०१ 12 2016:२:7 अपराह्न
एक "सल्लाहकार" को रूपमा, स्टिरियोटाइप टिप्पणीको विपरीत, म १००% सहमत छु। ध्यान स्प्यानमा मेरो दृष्टिकोण केही फरक छ। म मेरा क्लाइन्टहरूलाई व्याख्या गर्दछु कि ध्यान फ्याँकिएको छ वा सर्ट गरिएको छैन ... ध्यान स्प्यानहरू बढी संकुचित दिमाग केन्द्रित छन्। संकुचित सामग्रीमा ध्यान दिनुहोस् कि उनीहरूको आवश्यकताहरू र चाहिन्छ।